September 2018 | Language Century Language Century
2:37 AM C-Dialogue , Chinese
သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် ပြောတတ်စေဖို့အတွက် စကားပြော သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါ။
☞ Nǐ xǐhuan Zhōngguó ma?
☞ နီး ရှီဟွမ်း ကျုံးh(င်)ကော် မား
☞ မင်း တရုတ်နိုင်ငံကို သဘောကျလား။
☞ Nǐ xǐhuan shénme?
☞ နီး ရှီဟွမ်း ရှဲhမဲာ့
☞ နင် ဘာကြိုက်လဲ။
☞ Zhōngguó cài.
☞ ကျုံးh(င်)ကော် ဆိုက်
☞ တရုတ် အစားအစာတွေကိုပေါ့။
သူ့အကွိုကျ ကိုယျ့အကွိုကျ ပွောတတျစဖေို့အတှကျ စကားပွော သငျခနျးစာလေးတဈခုပါ။
☞ နီး ရှီဟှမျး ကြုံးh(ငျ)ကျော မား
☞ မငျး တရုတျနိုငျငံကို သဘောကလြား။
☞ နီး ရှီဟှမျး ရှဲhမဲာ့
☞ နငျ ဘာကွိုကျလဲ။
☞ ကြုံးh(ငျ)ကျော ဆိုကျ
☞ တရုတျ အစားအစာတှကေိုပေါ့။
ချစ်တယ် - တရုတ်လ်ို ဘယ်လိုပြောလဲ။
2:06 AM C-Sentence , Chinese
ချစ်တာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ တရုတ်ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Wǒ ài nǐ.
☞ ဝေါ် အိုက် နီ
☞ ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်။
☞ Nǐ ài shéi?
☞ နီ အိုက် ရှေh
☞ နင် ဘယ်သူ့ကို ချစ်တာလဲ။
☞ Nǐ bú ài tā ma?
☞ နီ ပူ အိုက် ထား မား
☞ နင် သူ့ကို မချစ်ဘူးလား။
☞ Māma ài chī píngguǒ.
☞ မားမာ့ အိုက် ချီးh ဖျင်း(င်)ကော်
☞ မေမေက ပန်းသီးစားရတာ ကြိုက်တယ်။
☞ Tā wèishénme bú ài?
☞ ထား ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပူ အိုက်
☞ သူ ဘာလို့ မချစ်တာလဲ။
☞ Bàba ài chī shénme?
☞ ပါ့ပါ အိုက် ချီးh ရှဲhမဲာ့
☞ ဖေဖေက ဘာစားရတာ ကြိုက်လဲ။
☞ Wǒ de shì zhēn ài.
☞ ဝေါ် တဲ့ ရှစ်h ကျဲင်းhအိုက်
☞ ငါ့အချစ်က အချစ်စစ်ပါ။
☞ Nǐ zénme ài tā?
☞ နီး ဇဲင်zမဲာ့ အိုက် ထား
☞ နင် ဘယ်လို သူ့ကို ချစ်သွားတာလဲ။
☞ Nǐ ài bú ài tā?
☞ နီ အိုက် ပူ အိုက် ထား
☞ နင် သူ့ကို ချစ်လား မချစ်ဘူးလား။
☞ Wǒ bú ài tā le.
☞ ဝေါ် ပူ အိုက် ထား လဲာ့
☞ ငါ သူ့ကို မချစ်တော့ဘူး။
ခဈြတယျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ခဈြတာနဲ့ ပါတျသကျတဲ့ တရုတျဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ ဝျေါ အိုကျ နီ
☞ ငါ နငျ့ကို ခဈြတယျ။
☞ နီ အိုကျ ရှေh
☞ နငျ ဘယျသူ့ကို ခဈြတာလဲ။
☞ နီ ပူ အိုကျ ထား မား
☞ နငျ သူ့ကို မခဈြဘူးလား။
☞ မားမာ့ အိုကျ ခြီးh ဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ မမေကေ ပနျးသီးစားရတာ ကွိုကျတယျ။
☞ ထား ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပူ အိုကျ
☞ သူ ဘာလို့ မခဈြတာလဲ။
☞ ပါ့ပါ အိုကျ ခြီးh ရှဲhမဲာ့
☞ ဖဖေကေ ဘာစားရတာ ကွိုကျလဲ။
☞ ဝျေါ တဲ့ ရှဈh ကြဲငျးhအိုကျ
☞ ငါ့အခဈြက အခဈြစဈပါ။
☞ နီး ဇဲငျzမဲာ့ အိုကျ ထား
☞ နငျ ဘယျလို သူ့ကို ခဈြသှားတာလဲ။
☞ နီ အိုကျ ပူ အိုကျ ထား
☞ နငျ သူ့ကို ခဈြလား မခဈြဘူးလား။
☞ ဝျေါ ပူ အိုကျ ထား လဲာ့
☞ ငါ သူ့ကို မခဈြတော့ဘူး။
ချစ်သည် - ချစ်တယ် - ချစ်ခြင်း - ချစ် - အချစ် - ခဈြသညျ - ခဈြတယျ - ခဈြခွငျး - ခဈြ - အခဈြ - ai4 - ài - ai - 爱 - love - Love - 愛
1:27 AM C-Video , Chinese
စားသောက်စရာတွေကို တရုတ်လို ပြောဆိုတတ်စေဖို့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ - စားသောက်စရာများ
စားသောကျစရာတှကေို တရုတျလို ပွောဆိုတတျစဖေို့ ဗီဒီယို သငျခနျးစာလေးနဲ့ လကေ့ငျြ့ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အကွောငျးအရာ - စားသောကျစရာမြား
သိတယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
12:57 AM C-Sentence , Chinese
သိတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောလေ့ရှိကြတဲ့ စကားပြော ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Wǒ zhīdào.
☞ ဝေါ် ကျီးhတောက်
☞ ငါ သိတယ်။
☞ Nǐ wèishénme xiǎng zhīdào?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ရှန်(င်) ကျီးhတောက်
☞ နင် ဘာလို့ သိချင်တာလဲ။
☞ Wǒ zhīdào tā shuō shénme?
☞ ဝေါ် ကျီးhတောက် ထား ရှောh ရှဲhမဲာ့
☞ သူဘာပြောလဲဆိုတာ ငါ သိတယ်။
☞ Tā yě bù zhīdào ma?
☞ ထား ယယ် ပု ကျီးhတောက် မား
☞ သူလည်း မသိဘူးလား။
☞ Nǐ zhīdào tā qù nǎlǐ ma?
☞ နီ ကျီးhတောက် ထား ချွိ နားလီ မား
☞ သူဘယ်သွားလဲဆိုတာ မင်း သိလား။
☞ Shéi dōu bù zhīdào.
☞ ရှေh တိုး ပု ကျီးhတောက်
☞ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။
☞ Nǐ zhīdào tā de diànyóu ma?
☞ နီ ကျီးhတောက် ထား တဲ့ တျန့်ယို မား
☞ သူ့ E-mail ကို မင်း သိလား။
☞ Wǒ zhīdào le.
☞ ဝေါ် ကျီးhတောက် လဲာ့
☞ ငါ သိပြီ။
☞ Nǐ zhīdào ma?
☞ နီ ကျီးhတောက် မား
☞ နင် သိလား။
☞ Nǐ zhēnde bù zhīdào ma?
☞ နီ ကျဲင်းhတဲ့ ပု ကျီးhတောက် မား
☞ မင်း တကယ် မသိဘူးလား။
သိတယျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
သိတာနဲ့ ပါတျသကျပွီး ပွောလရှေိ့ကွတဲ့ စကားပွော ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ ဝျေါ ကြီးhတောကျ
☞ ငါ သိတယျ။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ရှနျ(ငျ) ကြီးhတောကျ
☞ နငျ ဘာလို့ သိခငျြတာလဲ။
☞ ဝျေါ ကြီးhတောကျ ထား ရှောh ရှဲhမဲာ့
☞ သူဘာပွောလဲဆိုတာ ငါ သိတယျ။
☞Tā yě bù zhīdào ma?
☞ ထား ယယျ ပု ကြီးhတောကျ မား
☞ သူလညျး မသိဘူးလား။
☞ နီ ကြီးhတောကျ ထား ခြှိ နားလီ မား
☞ သူဘယျသှားလဲဆိုတာ မငျး သိလား။
☞ ရှေh တိုး ပု ကြီးhတောကျ
☞ ဘယျသူမှ မသိပါဘူး။
☞ နီ ကြီးhတောကျ ထား တဲ့ တနျြ့ယို မား
☞ သူ့ E-mail ကို မငျး သိလား။
☞ ဝျေါ ကြီးhတောကျ လဲာ့
☞ ငါ သိပွီ။
☞ နီ ကြီးhတောကျ မား
☞ နငျ သိလား။
☞ နီ ကြဲငျးhတဲ့ ပု ကြီးhတောကျ မား
☞ မငျး တကယျ မသိဘူးလား။
Posted by - 江美玉
သိ - သိသည် - သိတယ် - သိခြင်း - သိ - သိသညျ - သိတယျ - သိခွငျး - know - Know - zhi1dao4 - zhi dao - zhīdào - 知道
9:22 PM C-Dialogue , Chinese
လမ်းပိတ်တဲ့အခါ တက္ကစီခေါ်လို့ အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကို ပြောဆိုတတ်စေဖို့ စကားပြောပုံစံလေးတစ်ခုပါ။
☞ Jiào jìchéngchē ba!
☞ ကျောက် ကျိချဲင်h(င်)ချဲh ပါ့
☞ တက္ကစီ ခေါ်ပါ။
☞ Xiànzài jiào bú dào.
☞ ရှန့်ဇိုက်z ကျောက် ပူတောက်
☞ အခု ခေါ်လို့မရပါဘူး။
☞ Wèi shénme ne?
☞ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ နဲ
☞ Yīnwèi xiànzài shì jiāotōng jiānfēng shíjiān.
☞ ယင်းဝေ့ ရှန့်ဇိုက်z ရှစ်h ကျောင်းထုံး(င်) ကျန်းဖဲင်းf(င်) ရှီhကျန်း
☞ အကြောင်းက ဒီအချိန်က ယာဉ်အသွားအလာ အများဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
Source: 華語會話 緬甸文版全册
လမျးပိတျတဲ့အခါ တက်ကစီချေါလို့ အဆငျမပွတေဲ့အကွောငျးကို ပွောဆိုတတျစဖေို့ စကားပွောပုံစံလေးတဈခုပါ။
☞ ကြောကျ ကြိခြဲငျh(ငျ)ခြဲh ပါ့
☞ တက်ကစီ ချေါပါ။
☞ ရှနျ့ဇိုကျz ကြောကျ ပူတောကျ
☞ အခု ချေါလို့မရပါဘူး။
☞ ဝရှေဲ့hမဲာ့ နဲ
☞ ယငျးဝေ့ ရှနျ့ဇိုကျz ရှဈh ကြောငျးထုံး(ငျ) ကနျြးဖဲငျးf(ငျ) ရှီhကနျြး
☞ အကွောငျးက ဒီအခြိနျက ယာဉျအသှားအလာ အမြားဆုံးအခြိနျ ဖွဈပါတယျ။
နောက်ကျတဲ့အခါမှာ တက္ကစီစီးပြီး သွားလို့ရတဲ့အကြောင်း၊ လောနေဖို့မလိုကြောင်း ပြောဆိုကြတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးပါ။
☞ Kuài yìdiǎn ma!
☞ ခွိုက် ယိတျန် မား
☞ Jí shénme!
☞ ကျီး ရှဲhမဲာ့
☞ ဘာတွေ လောနေတာလဲ။
☞ Shàng bān kuài yào chídào le.
☞ ရှန့်h(င်)ပန်း ခွိုက်ယောက် ချီhတောက် လဲာ့
☞ အလုပ် နောက်ကျတော့မယ်။
☞ Bié jí, zuò jìchéngchē jiù méi wèntí le.
☞ ပြဲကျီ ဇော့z ကျိချဲင်h(င်)ချဲh ကျို့ မေဝဲင့်ထီ လဲာ့
☞ မလောပါနဲ့၊ တက္ကစီနဲ့သွားရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။
နောကျကတြဲ့အခါမှာ တက်ကစီစီးပွီး သှားလို့ရတဲ့အကွောငျး၊ လောနဖေို့မလိုကွောငျး ပွောဆိုကွတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးပါ။
☞ ခှိုကျ ယိတနျြ မား
☞ ကြီး ရှဲhမဲာ့
☞ ဘာတှေ လောနတောလဲ။
☞ ရှနျ့h(ငျ)ပနျး ခှိုကျယောကျ ခြီhတောကျ လဲာ့
☞ အလုပျ နောကျကတြော့မယျ။
☞ ပွဲကြီ ဇော့z ကြိခြဲငျh(ငျ)ခြဲh ကြို့ မဝေဲငျ့ထီ လဲာ့
☞ မလောပါနဲ့၊ တက်ကစီနဲ့သှားရငျ ပွဿနာမရှိပါဘူး။
12:29 AM C-Dialogue , Chinese
သင် ထမင်း ဘယ်နှစ်ပန်းကန် စားနိုင်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပြောဆိုဖို့အတွက် ဒီစကားပြော သင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာထားနိုင်ပါတယ်။
☞ Sān wǎn fàn, nǐ chī de liǎo ma?
☞ စန်းဝမ် ဖန့်f နီ ချီးhတဲ့လျောင် မား
☞ ထမင်း သုံးပန်းကန်၊ ခင်ဗျား စားနိုင်သလား။
☞ Tài duō le, chī bù liǎo.
☞ ထိုက်တောလဲာ့ ချီးh ပုလျောင်
☞ သိပ်များတယ်၊ မစားန်ုင်ဘူး။
☞ Zhè yì wǎn fàn, nǐ chī de wán ma?
☞ ကျဲ့ ယိဝမ် ဖန့်f နီ ချီးhတဲ့ဝမ် မား
☞ ဒီထမင်း တစ်ပန်းကန်၊ ခင်ဗျား စားလို့ကုန်သလား။
☞ Méi wèntí, wǒ chī de wán.
☞ မေဝဲင့်ထီ ဝေါ် ချီးhတဲ့ဝမ်
☞ ရပါတယ်၊ ကျွန်တော် စားလို့ကုန်ပါတယ်။
သငျ ထမငျး ဘယျနှဈပနျးကနျ စားနိုငျသလဲဆိုတာကို ဖျောပွပွောဆိုဖို့အတှကျ ဒီစကားပွော သငျခနျးစာလေးကို လလေ့ာထားနိုငျပါတယျ။
☞ စနျးဝမျ ဖနျ့f နီ ခြီးhတဲ့လြောငျ မား
☞ ထမငျး သုံးပနျးကနျ၊ ခငျဗြား စားနိုငျသလား။
☞ ထိုကျတောလဲာ့ ခြီးh ပုလြောငျ
☞ သိပျမြားတယျ၊ မစားနျုငျဘူး။
☞ ကြဲ့ ယိဝမျ ဖနျ့f နီ ခြီးhတဲ့ဝမျ မား
☞ ဒီထမငျး တဈပနျးကနျ၊ ခငျဗြား စားလို့ကုနျသလား။
☞ မဝေဲငျ့ထီ ဝျေါ ခြီးhတဲ့ဝမျ
☞ ရပါတယျ၊ ကြှနျတျော စားလို့ကုနျပါတယျ။
10:31 PM C-Dialogue , Chinese
မိမိ ဘယ်နှစ်နာရီ အိပ်ယာထတယ်ဆိုတာကို ပြောဆိုတတ်အောင် ဒီစကားပြော သင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
☞ Zǎoshang wǔ diǎnzhōng, nǐ qǐ de lái ma?
☞ ဇောင်zရှန့်h(င်) ဝူးတျန်ကျုံးh(င်) နီး ချီတဲ့လိုင် မား
☞ မနက် ငါးနာရီ၊ ခင်ဗျား ထနိုင်သလား။
☞ Tài zǎo le, wǒ qǐ bù lái.
☞ ထိုက်ဇောင်zလဲာ့ ဝေါ် ချီပုလိုင်
☞ စောလွန်းတယ်၊ ကျွန်တော် မထနိုင်ပါ။
☞ Shénme shíhou nǐ cái qǐ de lái?
☞ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ နီ ဆိုင်း ချီတဲ့လိုင်
☞ ဘယ်ချိန်မှ ခင်ဗျား ထနိုင်သလဲ။
☞ Chà bù duō bā diǎnzhōng, wǒ cái qǐ de lái.
☞ ချာ့hပုတော ပါးတျန်ကျုံးh(င်) ဝေါ် ဆိုင်း ချီတဲ့လိုင်
☞ ရှစ်နာရီလောက်မှ၊ ကျွန်တော် ထနိုင်တယ်။
မိမိ ဘယျနှဈနာရီ အိပျယာထတယျဆိုတာကို ပွောဆိုတတျအောငျ ဒီစကားပွော သငျခနျးစာလေးကို လလေ့ာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
☞ ဇောငျzရှနျ့h(ငျ) ဝူးတနျြကြုံးh(ငျ) နီး ခြီတဲ့လိုငျ မား
☞ မနကျ ငါးနာရီ၊ ခငျဗြား ထနိုငျသလား။
☞ ထိုကျဇောငျzလဲာ့ ဝျေါ ခြီပုလိုငျ
☞ စောလှနျးတယျ၊ ကြှနျတျော မထနိုငျပါ။
☞ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ နီ ဆိုငျး ခြီတဲ့လိုငျ
☞ ဘယျခြိနျမှ ခငျဗြား ထနိုငျသလဲ။
☞ ခြာ့hပုတော ပါးတနျြကြုံးh(ငျ) ဝျေါ ဆိုငျး ခြီတဲ့လိုငျ
☞ ရှဈနာရီလောကျမှ၊ ကြှနျတျော ထနိုငျတယျ။
9:18 PM C-Pinyin , C-Video , Chinese
ဒီကနေ့မှာတော့ Pinyin လေ့လာကြသူတွေအတွက် အသံသင်္ကေတ တင်နည်းပုံစံတွေကို ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ - Pinyin (Video Lesson)
အကြောင်းအရာ - အသံသင်္ကေတ တင်နည်း
ဒီကနမှေ့ာတော့ Pinyin လလေ့ာကွသူတှအေတှကျ အသံသင်ျကတေ တငျနညျးပုံစံတှကေို ဗီဒီယို သငျခနျးစာလေးနဲ့ လကေ့ငျြ့ပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
သငျခနျးစာ - Pinyin (Video Lesson)
အကွောငျးအရာ - အသံသင်ျကတေ တငျနညျး
ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - အသံထွက် - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သငျခနျးစာ ပို့ခခြကျြ - ဝေါဟာရ - စကားပွော - တရုတျစကား - စိုငျးဆိုငျခမျးဝျ - အသံထှကျ - တရုတျဝေါဟာရ - တရုတျစကားပွော - Dialogue - Vocabulary - Pinyin - pinyin - pin1yin1 - pīnyīn - 拼音
7:27 PM C-Video , Chinese
အိမ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ ဝါကျတိုလေးများကို ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးနဲ့ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ - အိမ် 家 jiā
တရုတ် အသံထွက် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ။
7:38 PM C-Pinyin , C-Video , Chinese
တရုတ်အသံထွက် Pinyin ကို စတင်လေ့လာနေကြသူများအတွက် ဗျည်းသံတွေရဲ့ အသံထွက်နည်းတွေကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးနဲ့ လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ - တရုတ်အသံထွက် ဗျည်းသံများ အပိုင်း ၁
တရုတျ အသံထှကျ ဗီဒီယို သငျခနျးစာ။
တရုတျအသံထှကျ Pinyin ကို စတငျလလေ့ာနကွေသူမြားအတှကျ ဗညျြးသံတှရေဲ့ အသံထှကျနညျးတှကေို ဗီဒီယိုသငျခနျးစာလေးနဲ့ လကေ့ငျြ့နိုငျပါတယျ။
အကွောငျးအရာ - တရုတျအသံထှကျ ဗညျြးသံမြား အပိုငျး ၁
11:47 PM C-Dialogue , Chinese
မြို့နှစ်မြို့မှာ ဘယ်မြို့က မိုးပိုသည်းလဲဆိုတာကို ဥပမာပေး တင်စားပြောဆိုပုံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Shàng ge xīngqī wǒ qù le Shànghǎi, nàr de tiānqì tài zāogāo le.
☞ ရှန့်h(င်)ကဲာ့ ရှင်း(င်)ချီး ဝေါ် ချွိ လဲာ့ ရှန့်h(င်)ဟိုင် နာ့r တဲ့ ထျန်းချိ ထိုက် ဇောင်းzကောင်း လဲာ့
☞ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်က ငါ ရှန်ဟိုင်းကို သွားတာ၊ အဲဒီမှာ ရာသီဥတုက အရမ်း ဆိုးတာပဲ။
☞ Shànghǎi de tiānqì yídìng méi yǒu Guǎngzhōu de zāogāo.
☞ ရှန့်h(င်)ဟိုင် တဲ့ ထျန်းချိ ယီတင့်(င်) မေးယို ကွမ်(င်)ကျိုးh တဲ့ ဇောင်းzကောင်း
☞ ရှန်ဟိုင်းရဲ့ ရာသီဥတုက ကွမ်ကျိုးလောက်တော့ မဆိုးပါဘူး။
☞ Shàng ge xīngqī Shànghǎi tiān tiān xià yǔ.
☞ ရှန့်h(င်)ကဲာ့ ရှင်း(င်)ချီး ရှန့်h(င်)ဟိုင် ထျန်းထျန်း ရှာ့ယွီ
☞ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်က ရှန်ဟိုင်းမှာ နေ့တိုင်း မိုးရွာတယ်။
☞ Guǎngzhōu yě xià le qī tiān yǔ.
☞ ကွမ်(င်)ကျိုးh ယယ် ရှာ့ လဲာ့ ချီးထျန်း ယွီ
☞ ကွမ်ကျိုးမှာလည်း တစ်ပါတ်ဆက်တိုက် ရွာတယ်။
☞ Shànghǎi de yǔ dà de rén rén dōu bù néng chū mén.
☞ ရှန့်h(င်)ဟိုင် တဲ့ ယွီ တာ့ တဲ့ ရဲင်းrရဲင်r တိုး ပု နဲင်(င်) ချူးhမဲင်
☞ ရှန်ဟိုင်းမှာ မိုးသည်းလို့ လူတွေတောင် အပြင်မထွက်နိုင်ကြဘူး။
☞ Guǎngzhōu de yǔ dà de huǒlièniǎo dōu zài jiē shang yóuyǒng le.
☞ ကွမ်(င်)ကျိုးh တဲ့ ယွီ တာ့ တဲ့ ဟော်လျဲ့နျောင် တိုး ဇိုက်z ကျဲရှန့်h(င်) ယိုးယုံ(င်) လဲာ့
☞ ကွမ်ကျိုးမှာ မိုးသည်းချက်ကတော့ ကြိုးကြာနီတွေတောင် လမ်းပေါ်မှာ ရေကူးနေရတယ်။
☞ Wǒ de tiān, Guǎngzhōu de yǔ bǐ Shànghǎi dà duō le.
☞ ဝေါ် တဲ့ ထျန်း ကွမ်(င်)ကျိုးh တဲ့ ယွီ ပီ ရှန့်h(င်)ဟိုင် တာ့ တော လဲာ့
☞ ဘုရားရေ၊ ကွမ်ကျိုးရဲ့ မိုးက ရှန်ဟိုင်းထက် ပိုသည်းတာပဲ။
မွို့နှဈမွို့မှာ ဘယျမွို့က မိုးပိုသညျးလဲဆိုတာကို ဥပမာပေး တငျစားပွောဆိုပုံလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ရှနျ့h(ငျ)ကဲာ့ ရှငျး(ငျ)ခြီး ဝျေါ ခြှိ လဲာ့ ရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ နာ့r တဲ့ ထနျြးခြိ ထိုကျ ဇောငျးzကောငျး လဲာ့
☞ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပါတျက ငါ ရှနျဟိုငျးကို သှားတာ၊ အဲဒီမှာ ရာသီဥတုက အရမျး ဆိုးတာပဲ။
☞ ရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ တဲ့ ထနျြးခြိ ယီတငျ့(ငျ) မေးယို ကှမျ(ငျ)ကြိုးh တဲ့ ဇောငျးzကောငျး
☞ ရှနျဟိုငျးရဲ့ ရာသီဥတုက ကှမျကြိုးလောကျတော့ မဆိုးပါဘူး။
☞ ရှနျ့h(ငျ)ကဲာ့ ရှငျး(ငျ)ခြီး ရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ ထနျြးထနျြး ရှာ့ယှီ
☞ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပါတျက ရှနျဟိုငျးမှာ နတေို့ငျး မိုးရှာတယျ။
☞ ကှမျ(ငျ)ကြိုးh ယယျ ရှာ့ လဲာ့ ခြီးထနျြး ယှီ
☞ ကှမျကြိုးမှာလညျး တဈပါတျဆကျတိုကျ ရှာတယျ။
☞ ရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ တဲ့ ယှီ တာ့ တဲ့ ရဲငျးrရဲငျr တိုး ပု နဲငျ(ငျ) ခြူးhမဲငျ
☞ ရှနျဟိုငျးမှာ မိုးသညျးလို့ လူတှတေောငျ အပွငျမထှကျနိုငျကွဘူး။
☞ ကှမျ(ငျ)ကြိုးh တဲ့ ယှီ တာ့ တဲ့ ဟျောလြဲ့နြောငျ တိုး ဇိုကျz ကြဲရှနျ့h(ငျ) ယိုးယုံ(ငျ) လဲာ့
☞ ကှမျကြိုးမှာ မိုးသညျးခကျြကတော့ ကွိုးကွာနီတှတေောငျ လမျးပျေါမှာ ရကေူးနရေတယျ။
☞ ဝျေါ တဲ့ ထနျြး ကှမျ(ငျ)ကြိုးh တဲ့ ယှီ ပီ ရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ တာ့ တော လဲာ့
☞ ဘုရားရေ၊ ကှမျကြိုးရဲ့ မိုးက ရှနျဟိုငျးထကျ ပိုသညျးတာပဲ။